iJocko Valley Retreat
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguCindy
Le ndlu ye-2 BR ikwikhaya elikhulu lomsedare kwi-Jocko Valley, indawo yasendle kunye neparadesi yeentaka. Indlu eyi-1000 sq ft inamagumbi okulala ama-2 kakumkanikazi abucala, igumbi lokuhlala, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokutyela / lemidlalo... indlela yabucala yokukhwela intaba/yokubhabha. Yonwabela ibhafu eshushu kunye negrill yegesi ebekwe kanye ngaphandle komnyango wakho wabucala wokungena. Relax ngasechibini okanye kwi-sauna. Uyonwabele ubusuku okanye iveki kunye nembonakalo entle, evuselela ukurhoxa onokuthi uyijonge. Abanini bahlala phezulu.
I-Wi-Fi, iTV yesathelayithi, kunye nesithuba sokusebenza. Iihektare ezingama-20 kunye nedama zibukeka kakhulu ... iindlela zokuhamba zabucala, imidlalo yeeyadi kunye neenkampu zomlilo zinika iinketho ezininzi zeBig Sky. Sixhotyiselwe umsebenzi okanye ukudlala apha. Uninzi lweendwendwe zivuya "ngoxolo noxolo". IPet Friendly
4.97 ·Izimvo eziyi-481
4.97 out of 5 stars from 481 reviews
4.97 · Izimvo eziyi-481
Eli likhaya lelizwe kunye nokujonga izilwanyana zasendle yinto yemihla ngemihla. USindi ungumntu othanda ukubukela iintaka kwaye uyaphakela iintaka. Silungisa iindlela zethu zokukhwela intaba ukuze sifumane amava okuzilolonga okanye ukutyibiliza ekhephini kwilizwe le-X. I-National Bison Range, i-Ninepipes Wildlife Refuge, i-Flathead Lake, iYunivesithi yaseMontana kunye ne-Snowbowl Ski Resort zonke zingaphakathi kwemizuzu ye-45. I-Missoula kunye nayo yonke into enayo yimizuzu engama-30 kwaye ikwiikhilomitha ezi-3 ukuya e-Arlee ngegesi kunye nezinto ezibalulekileyo. Siziiyure ezingama-2.5 ukusuka eWest Glacier.
Abanini, uJim kunye noCindy bahlala kwinqanaba eliphezulu elahluke ngokupheleleyo kwaye baya kufumaneka ngemibuzo kunye nokungena kade. Sinikezela ngoncedo oluninzi kunye nonxibelelwano njengoko ukonwabela okanye ubumfihlo obupheleleyo ukuba kukuthanda kwakho.
Abanini, uJim kunye noCindy bahlala kwinqanaba eliphezulu elahluke ngokupheleleyo kwaye baya kufumaneka ngemibuzo kunye nokungena kade. Sinikezela ngoncedo oluninzi kunye nonxibele…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Arlee